Sivas Ankara Yüksek Hızlı Tren İnşasında6Bin Kişi Çalışıyor – RayHaber | raillynews
[17 / 01 / 2020] Mobile Trading Point Tools များဖြင့် Istanbukart တန်းစီ	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 01 / 2020] မြို့တော်ဝန်Yavaş:“ ငါတို့မက်ထရိုလိုင်းများကိုပြည်သူလူထုအားမေးပါ့မယ်”	06 တူရကီ
[17 / 01 / 2020] Adalar ရှိမှတ်ပုံတင်ထားသော Phaeton Plates များသည် IMM သို့သွားသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[17 / 01 / 2020] Kocaeli Public Pool Common Pool System သည်စည်းဝေးပွဲကိုဖြတ်သန်းသွားသည်	41 Kocaeli
[16 / 01 / 2020] သမ္မတအာဒိုဂန်ကပြည်တွင်းကားကိုကျွနု်ပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်မှာသေချာပါတယ်။	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီ6 ထောင်နှင့်ချီသောသူတို့သည် Sivas Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်
12 / 12 / 2019 06 တူရကီ, 58 Sivas, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
လူထောင်ပေါင်းများစွာသည် Sivas Ankara ရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားတည်ဆောက်မှုတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်
အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးစီးမည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည့် Sivas Ankara အမြန်ရထားရထားစီမံကိန်းသည်အဆုံးသတ်သွားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်မီးရထား ၀ န်ထမ်းများသမဂ္ဂ၏ဥက္ကChairman္ဌအဗ္ဗဒူလာပီကူသည်အကြီးအကျယ်ကြိုးပမ်းမှုများလုပ်ဆောင်နေသည့်ကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီများ၊ Sivas ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Salih Ayhan၊ Sivas မြို့တော်ဝန် Av.Hilmi Bilgin နှင့် TCDD အမှုဆောင်များအားစီမံကိန်း၏အဆင့်တစ်ခုချင်းစီနှင့်အနီးကပ်သတင်းများရရှိသည့်ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ။
အရာပိုမိုနီးကပ်စွာ Sivas-တူရကီအထက်တန်းမြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း၏အဆုံးတူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစီမံကိန်း၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများပြီးစီးပြီး 406 ကီလိုမီတာလိုင်းတစ်လျှောက်ရှိ 150 ၀ န်ထမ်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၀ န်ထမ်းထောင်နှင့်ချီ။ ရထားလမ်းဖောက်ခြင်းများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်မပြတ်တမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရထားလမ်းစီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကို Sivas မြို့လယ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့်ရောက်ရှိသောမြို့များသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးအရဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ Bakanlığıသဘာပတိ၏လက်အောက်တွင်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်အမြန်ရထားရထားလမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်၎င်း၏ဌာနများအားလုံးနှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
Sivas နှင့် Ankara အကြားရှိလမ်းသည် 446 Kilometer ဖြစ်ပြီး YHT မျဉ်း၏အရှည်မှာ 406 Kilometer ဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဖြင့် Sivas နှင့် Ankara အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 2,5 နာရီ၊ Istanbul-Sivas သည်5နာရီအကြာတွင်ရှိသည်။ ခရီးသွားချိန်ကိုတိုစေပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်မီသောခရီးကိုပေးလိမ့်မည်။ စီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါ Sivas သည်အဓိကစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲများနှင့်ပြောင်းရွှေ့မှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိမ့်မည်။
Sivas Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဝန်ဆောင်မှု 2020 ၏ပထမခြောက်လအတွင်းစတင်ပါလိမ့်မည်။
Ankara Sivas မြန်နှုန်းမြင့်ရထား၏မြေပုံ
အလွန်မြန်မြန်ရထားတင်ဒါ | Ankara-Konya မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းသည် ၆ အမြင့်ရှိသည်။
3. 18 လူလေဆိပ်မှာအလုပ်လုပ်ကြသည်
တိုးတက်မှုအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် 20 တထောင်ကလူ
Bilecik သည်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားတည်ဆောက်မှု ၂ ခုကိုခိုးယူခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်
တစ်ရက်ခရီးစဉ်လုပ်နေတာ6တထောင်ကလူတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လိုင်း
အဆိုပါတူရကီ-Sivas မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအတွက်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး viaduct
TCDD '' တွင်း, 'ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင်းအစီရင်ခံစာများအဖို့ငြင်းပယ်' ၌ high-speed ရထားပျက်စီးမှု Build
TCDD '' တွင်း, 'ပုံသဏ္ဍာန်ကြောင်းအစီရင်ခံစာများအဖို့ဆောက်လုပ်ရေး' 'ငြင်းပယ်အတွက်အစာရှောင်ရထားပျက်ကျမှု
Ankara - Sivas အမြန်နှုန်းစီမံကိန်းYerköy - Yozgat - Sivas altyapı
မြန်နှုန်းရထားစီမံကိန်း UK ရှိဆောက်လုပ်ရေး၏ 2017 စတင်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်
တစ်ထောင်ပြည်သူ့အတွက်အောက်တိုဘာလ7768 သန်းယာဉ်များအတွက်İZBAN
Kayseri သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်အတွက် 350 တစ်ထောင်ပြည်သူ့ခုနှစ်တွင်နေ့ရွှေ့
တူရကီနှင့် Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလမ်းကြောင်း
တူရကီနှင့် Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘူတာ
Sivas Ankara မြန်နှုန်းမြင့်ရထား
တူရကီထုတ်လွှတ်သည် 2020 ခုနှစ်တွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်နှင့်တွေ့ဆုံ
နစ်နာမှုများသည် Electronic Notification System ဖြင့်သမိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်
Adalar ရှိမှတ်ပုံတင်ထားသော Phaeton Plates များသည် IMM သို့သွားသည်
Meles Stream အတွက်ဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ
Kocaeli Public Pool Common Pool System သည်စည်းဝေးပွဲကိုဖြတ်သန်းသွားသည်
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၉၃၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
သမ္မတအာဒိုဂန်ကပြည်တွင်းကားကိုကျွနု်ပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးအပ်မှာသေချာပါတယ်။
Bursa Iznik Ankara Metro နှင့်Başkentrayရှိပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယို
YHT Business Class အထူးလျှော့စျေးများ
2019 ခုနှစ်တွင် Ordu Boztepe ကြိုးသဘောင်္သည်ခရီးသည် ၇၉၆ ယောက်ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်
TRAGGER သည် ANFAS တွင်ခရီးသွားကဏ္ Me နှင့်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော T-Car နှင့်တွေ့ဆုံသည်
2019. ပွဲအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ရရှိသောခဲ့သော Castrol Ford ကားရေးအဖွဲ့တူရကီ,
ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက်သည် ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင်မောင်းသူမဲ့ယာဉ်များစီးသွားသည်